Dagaalka Tukaraq: labo nin oo bidaar leh oo shanlo ku dagaalamaysa!
Abaahay waa reer Garoowe, Hooyaday waa reer Laascaanood, Saaxiibaday waa reer Hargaisa, Xamar ayaan ku koray, Sinjigaygu waa Soomaali , Diintayduna waa Islaam.....
Waxaan Hargaisa joognay asbuuc, si gobanimo iyo hospitality gii ama soo dhawayntii Duriyada Sheekh Isxaaq lagu yiqiinay ayayna axsaab iyo ehel badan oon halkaas ku lahaa igu soo dhaweeyeen. Casumaadaha magaalada dhexdeeda waxaa ii dheeraa dalxiis iyo buuro fuulis (Hiking) la ii geeyay deegaanka Abaarsay (Abaarso) iyo Xeebta Batalaale oo la igu casumay balse wakhtigu ii saamixi waayay inaan tago, Waxaa airport nagu sii sagootiyay xubin Baarlamaanka Somaliland ku jira oo aan ehel hoose nahay, waxaanan kasoo tegay halkaasi anigoo weli xiiso u qaba inaan sii joogo, saaxiibadii aan horay ugu lahaa iyo kuwo aan ku soo bartayna ilaa maanta ayaan is wacnaa iyagoo ileh "goormaad nasoo gaadhi?”.
· Sidoo kale dagaalkani masii socon doono maadaama aysan labada maamul heli karin saad, sahay iyo saanad ay kusii wadi karaan colaadaa daba dheeraata,(walow ay jiraan qolooyin labada dhinacba isku soo hubeeyay oo midkasta saanad soo siiya , saaxiibna ay u haystaan balse ula jeedadodu tahay Soomaali isku jebi)....!
Dagaaladu kolkay ka dheceen Muqdishu 1991 ayaa islaan waayeel ah waxay ehelkeedii ku tiri “Maandhooyinow anigu waayeel baan ahay oo cidi wax ugu falimayso cidina dhib iima gaysanaysee idinku naftiina badbaadiya, gurigana anigaa sii joogaya oo ilaalinayee, markii dagaalku dhamaado oo la isku soo noqdanba meesha iigu imaada” .... Islaantii mudo kadib markii dagaalkii joogsan waayay weji qabiilna yeeshay ayaa maalin aqalkii waxaa ugu soo dhacay labo kooxood oo midba rabaan gurigaan weyn oo iska xidhan inay bililiqaystaan... Qoladii daaqada ka soo gashay iyo kuwii derbiga ka soo booday ayaa isku qabsaday “Wadaayoow anagaa idinka hor taabsanahaye naga qaleeye, iyo mayee anagaa idinka soo horaynay ee Meesha isaga huleeya yaynaan isku ceeboobine!. Dood dheer kadib ayay arkeen islaan waayeel ah oo sali ku fadhina iskana wardinaysa, waxaa lagu heshiiyay in islaanta markhaanti loo qabsado si u kala saarto. Waxaa ladhahay “Eedo ilaahaan kugu dhaarinee labadayada yaa soo horeeyay”... Duqdii xariifad ayay ahayd doodana way maqlaysay, filinkana way la fahamtay labada kooxood, markaas ayay tiri “Maandhooyinow, hadii soo kala horayn wax lagu kala helayo labadiinaba anigaa idinka soo horeeyay”.